Mujrim Axmed Madoobe oo Cadaystay in uu yahay shariica diid kadib markii Xisbul Islaam ay Iska Eryeen. | Halganka Online
Mujrim Axmed Madoobe oo Cadaystay in uu yahay shariica diid kadib markii Xisbul Islaam ay Iska Eryeen.
Posted on Maajo 14, 2010 by halganka
Mujrim Axmed Madoobe oo ahaa hogaamiyihii shareeca diidka ee Wilaayada islaamiga Jubbooyinka kula dagaalamay gobalada Jubbooyinka ayaa ku dhawaaqay in uu ka baxay Xisbul Islaam oo uu si fulaynimo ah magaceeda usheegan jiray.
Axmed Madoobe oo in mudda ah ku qaraabanayay Magaca Xisbul islaam ayaa is cadeeyay in uu ka baxay xayndaabka islaamiyiinta kadib markii hogaanka xisbul Islaamka ay dharaar cad u sheegeen in Axmed madoobe cadaw yahay oo uu Riddo iyo gaalada Kenya ku biiray.
Isagoo Dhulka NDF shir ku qabtay wuxuu sheegay in Xisbul Islaam ka baxay islamarkaana uu dib boorka uga jafi doono Mucaskarkii raaskaambooni oo horay looga Eryay taasi oo uu ku doonayo in uu shaar diin ladirir uga dhigto.
Mujrim Axmed Madoobe ayaa ku fashilmay duulaan uu Wilaayada islaamiga Jubbada Hoose ku qaaday wixii xiligaasi ka dambeeyay cadaadi kala kulmayay beelaha Jubbooyinka oo u arkay in uu yahay Nin shareeca diid naddda u diidan umadda Muslimka ah.
Gudoomiyaha Xisbul Islaam Sheekh Xasan daahir Aweys ayaa bishii lasoo dhaafay sheegay in Axmed madoobe uu ula midyahay Cadawga Riddada iyo AMISOM dagaalna ay lageli doonaan.
Hadaladii kasoo baxayay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ee ahaa in Axmed Madoobe uu yahay shareeca diid cadaw ah ayaa xaqiiq noqday waxayna shacabka Muslimiinta ah uga mahad celiyeen xarakada Shabaab sidii ay Maleeshiyaadkii Axmed Madoobe uga difaaceen shareecada alle.
« Abshir Bacadle “Xamid Karzaay ayaa dhaama qolada Dowlada sheegata ee Cadawga AMISOM hoos fadhida”. Sarkaal katirsanaa Maleeshiyaadkii Axmed Madoobe oo iskusoo dhiibay Wilaayada Islaamiga degmada Afmadoow. »